Shirkadda ee PVC dabaqa isboortiga waa ka wanaagsan? - Shiinaha Shijiazhuang Yichen caaga Floor
Shirkadda ee PVC dabaqa isboortiga waa ka wanaagsan?
PVC dabaqa isboortiga waa nooc ka mid ah dabaqa horumariyo si gaar ah loogu talagalay dhulka isboortiga adigoo isticmaalaya PVC Qalabka. Gaar ah, waxaa la soo saaray farsamo daahan nadiifin ama daahan calendering, extruding ama farsamo-saxaafadeed, on sheet substrate ah oo joogto ah, iyadoo la isticmaalayo PVC iyo Beeyada co-polymer sida qalabka ugu weyn ee cayriin ka dibna ku dar filler, plasticizer, stabilizer, colorant iyo qalabka kale ee kaabayaal ah.
Markaas shirkadda oo ee PVC Gogosha isboortiga waa ka wanaagsan? Gogosha isboortiga ee Yichen Shijiazhuang Sports caaga Floor Co., Ltd uu leeyahay midab dhalaalaya, hannaanka cad iyo dareen taabasho, lakabka hufan iyo feature wanaagsan oo antislip, nuugista lama filaan ah, iwm Gogosha ayaa maray shahaadada ee ilaalinta deegaanka, waa ku cagaar iyo bey'ada waxyaabaha -friendly. Waxaa loo isticmaali karaa meelaha looga baahan yahay ilaalinta deegaanka, sida meelaha baabuurta sare sida isbitaalka, kindergarten, iwm Sidoo kale, rakibaadda Gogosha PVC ee waa mid aad u fudud oo ku habboon. Kaliya la is-Nigeria la taaban karo, waxa lagu rakibi karo, oo ma jiri doonaan guuxa weyn inta lagu guda jiro rakibaadda.
Shijiazhuang Yichen Sports caaga Floor Co., Ltd., sida soo saaraha ah xirfadeed ee PVC Gogosha isboortiga, ayaa gacanta tayo adag oo adeeg ka xoogbadan-iibka ka dib, in la hubiyo in macaamiisha kasta helo wax soo saarka u qalma.
Hubinta Tayada Product: waxyaabaha Our aadan haysan faraqa midabka (isku Dufcaddii), ku laayeen dhogorta idaad ah, ku laayeen caleen hooska badan, faa'iido, oo dhumucdiisuna waxay sinnayn, ur iyo dhibaatooyinka qaladaadkeyga kale. Dhamaan waxyaabaha Yichen lagu tilmaamay doonaa shahaado aqoon ka hor inta uusan warshad. Sidoo kale damaanad ah ee wax soo saarka laftiisa waa 6 sano (dhamaadka sare), 2 sano tayada caadiga ah. (Marka laga reebo wax soo saarka gaar ah kartoo iyo yaraynta tayada ay keento isticmaalka, rakibaadda, dayactirka saboolka ah.)
waxyaabaha ugu weyn ee Yichen Shijiazhuang Sports caaga Floor Co., Ltd, dabaqa caag, sagxadda dhulka PVC, sagxadda dhulka isboortiga, UV Gogosha taxane, sagxadda dhulka dhqaalaha iwm. waxyaabaha lagu ma soo dhaweeyay kaliya ee suuqyada maxalliga ah, laakiin sidoo kale suuqa oversea. Yichen dabaqa leeyahay sumcad aad u wanaagsan iyo rumaysad iyo iskaashiga wanaagsan ula macaamiisha gudaha iyo dibada on tayada wax soo saarka, adeegga iyo adeeg-iibka ka dib, iwm